PressReader - Ilanga: 2017-08-31 - Ipolitiki wukudla komntakabani
Ipolitiki wukudla komntakabani
Ilanga - 2017-08-31 - Imib - Thusang Motloung ENQUTHU
MHLELI: Kwelakho elibika ngokungenzeleli, nami mangisike elijikayo. Impela ipolitiki yaseNingizimu Afrika ngeyomntakabani ngoba noma ungalisebenzela kanjani iqembu lakho lezepolitiki, uma nje ungezwani nabathile ngeke uye ndawo.
Lokhu ngikusho ngenxa yendlela abanye abantu abazinikela ngayo ekusebenzeleni amaqembu abo kodwa uma sekumele kudliwe izithelo zokusebenza, bakhishwe inyumbazane. Lapha kwelakithi eNquthu, iNkatha idle umhlanganiso ngamalengiso okhethweni lokuchibiyela, manje sekumele lisebenzele abantu baseNquthu.
Silindele ukubona intuthuko njengoba sathenjiswa ngaphambi kokhetho futhi sifuna ukubona amathuba emisebenzi evuleka kuzona zonke izakhamizi hhayi njengoba bekwenza iqembu elisanda kuphuma emandleni la umasipala ubusuphenduke iLesotho, kuqashwa abeSotho kuphela (okungabakithi).
Silindele ukubona zidla ekhaya kuyona iNkatha ngoba phela ngeke izingane zabantu zisebenze ubusuku nemini, lishisa limakhaza bese zivele zilahlelwa ngaphandle nje, sibone sekunobuso esingabazi kumasipala wethu. Yebo, kubalulekile ukuba kuqashwe abantu abawufundele umsebenzi kodwa-ke sithini ngalabo abanekhono kodwa abangayanga emanyuvesi?
Balunge bebhuquza nje belokhu behla benyuka nezikibha zepolitiki? Kuthiwani ngentsha ehlala njalo izimisele ngokusebenzela umphakathi waseNquthu ingaholi?
Uma sekunemisebenzi abaholi balanda izihlobo zabo bavike ngokuthi bafuna umuntu abamethembayo. Lezi zingane abasuke kade behleli nazo ubusuku nemini, zenza imikhankaso yamaqembu azo bese kuthi uma sebengenile ezikhundleni abaholi bafune umuntu abamethembayo. Kawusamethembi lo muntu obumfonela phakathi kwamabili ukhulume naye ngokuthi kuyokhankaswa kuphi, kanjani? Kawusamethembi lo muntu obuwehla wenyuka naye ebusuku kubuywa emihlanganweni? Uma kungadlalwa ngezingane zabantu zenziwe ogandaganda bona abagabavula bakhe umgwaqo kodwa uma sewuphelile usunetiyela, bangavumeleki ukuhamba kuwona.